3D obibi - Ikkaro
Nnukwu mgbanwe ọrụ nka na akụ na ụba nke narị afọ nke 3 a na-ekwe nkwa ịbụ XNUMXD Printing, usoro nrụpụta nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọhụụ, ka na-ewu ewu ma kwe nkwa iru ụlọ niile.
Cheedị ihe ọ ga - adị ka inwe ike inwe akụkụ na ihe ịchọrọ. Ọdịnihu bụ na onye ọ bụla nwere onye obibi akwụkwọ 3D n'ụlọ yana na ihu dị mfe nke na onye ọ bụla nwere ike iji ya, dị ka a ga - asị na ọ bụ kọmputa ma ọ bụ ngwa ụlọ ọzọ. You ga-aga ụlọ ahịa akụrụngwa ma ọ bụrụ na ị nwere ike ibipụta ihe ị chọrọ n'ụlọ? Nke a bụ ebe anyị na-aga.
Ugbu a ọ bụ nrọ nke ndị na-eme ihe, ndị na-agba ọsọ na ndị hụrụ Mee N'onwe Gị ...
Site na Ikkaro anyị banyere ụwa a na-adọrọ mmasị nke mbipụta 3d iji kụziere gị akụkụ niile, site na imewe nke akụkụ maka ịzụta na nzukọ nke ngwaike dị iche iche mepere emepe ma ọ bụ ndị na-ebi akwụkwọ ngwaike n'efu.
Dị ka oge niile, anyị chọrọ ịnye ozi ahụ n'uju zuru oke enwere ike, site na ntuziaka ntụzi-aka nke usoro na nkuzi na n'ụzọ kachasị tinye n'ọrụ.
Ihe ị ga - ele iji zụta ihe eji ebi 3D
Ọ bụrụ na ọ bụ kọntaktị izizi ị nwere ụwa nke obibi akwụkwọ na 3D na-ebi akwụkwọ Ma ọ bụ n'ihi na ị ga-eji otu ma ọ bụ n'ihi na ịchọrọ ịzụta ya na ị maghị n'ezie ihe ị ga-ele anya, ana m ahapụrụ gị ntọala na njirimara ndị bụ isi ị ga-elebara anya iji nwee ike iji ha tụnyere. chọpụta ụdị onye nbipute ị nwere mmasị na ya.
Nwee ezi uche taa Ndị na-ebi akwụkwọ 3D abụghị maka onye ọrụ njedebe, nke ahụ bụ, maka ọha na eze. Ọ dịghị ka ngwa ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla, na ị nwere ike iji ya mara obere ihe ma ọ bụ mmasị. Lee ị chọrọ ma ụfọdụ ihe ọmụma ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ụfọdụ nchegbu na-enwe ike iji nweta ọtụtụ ihe na ngwaọrụ.